Nei Luz de Maria de Bonilla? - Kuverengera kuhumambo
Mushure memakore ekuzvirega kwake kune kuda kwaMwari, Luz de María akatanga kurwadziwa nemuchinjiro, waanotakura mumuviri wake pamwe nemweya. Izvi zvakatanga kuitika, akagovana, paChishanu Chakanaka: “Ishe wedu vandibvunza kana ndaida kutora chikamu munhamo dzake. Ini ndakapindura ndichivimbisa, uye mushure mezuva rekuenderera mberi kweminamato, husiku ihwohwo, Kristu akazviratidza kwandiri paMuchinjiko akagovana maronda ake. "Kwaive kurwadza kusinga tsanangurike, kunyangwe ndichiziva kuti kunyangwe hazvo kuchirwadza sei, hakusi iko kurwadziwa kwakazara uko Kristu anoramba achitambura nekuda kwevanhu."
• The Imprimatur yeChechi yeKaturike, yakapihwa naBishop Juan Abelardo Mata Guevara veEsteril muna 2017 kunyorwa naLuz de Maria mushure ma2009, pamwe chete nechirevo chega chega chinosimbisa kudavira kwake mukutenda kwavo kwemweya.
Mharidzo kubva kuna Luz de Maria de Bonilla
Luz - Ino ndiyo Nguva!
Teerera kune zviratidzo nezviratidzo.
Luz - Runyerekupe rweHondo…
...zvino chirega kuva makuhwa.
Luz – Remekedzai
Wava munhu ane rima pakati pavo pasina kuvimbika...
Luz - Communism iri Kufambira Mberi
...nekusununguka kukuru, kunopiwa nevanhu pachavo.
Ruzi - Potera muareka yoRuponeso
... vachipesana nemasimba ehupfumi akaronga kuparadzira kupererwa panyika.
Luz - Shanduko inoenderera mberi
Zvinobata nguva yese.
Luz – Huya Kuna Amai Ava
Luz – Zodza Mikova Yako
... uye zvipire kuKuda kwaMwari.
Luz – Nyika Ichayerera Nemukaka neuchi
Luz - Nguva yekuzadzikiswa kweHuporofita Hukuru
Yambiro ichave chiitiko chikuru chetsitsi.
Ruzi - SeShongwe yeBhabheri
Vanhu vakavhiringika, vachiendeswa kuuranda.
Luz - Iva Kuwedzerwa kweKuda kwaMwari
Ramba uchiwedzera pakunamata.
Luz - Ndikumbirei Siku nesikati
Chechi iri kunanga mukusawirirana kuzere.
Luz - Nzara Iri Kuuya
Ini ndinokudana kuti urambe uchinamata Holy Rosary uye Chaplet.
Luz - Dambudziko Rinouya kubva kuEgo
Luzi - Ruoko rwaMwari Harugone Kudzora
... asi Achadzivirira vana Vake.
Luz - Mushini weCommunism
Yakasimuka kudzikisira uye kudzvinyirira vanhu.
Luz de Maria - Unofanirwa Kurwa Kuti Uchengete Kutenda
Hauna chekudya here? Nzara yasvika here? Tendeukira Kugoverwa kwaMwari.
Luz - Mambokadzi wenguva yekupedzisira
Mwanakomana wekuparadzwa atove kushanda.
Luz - Unodzokera Kuhupenyu Hupenyu
Asi hausi wega.
Chizvarwa chako chinozadzisa kuda Kwangu.
Luz - Haufambike
Kutambudzwa kwatanga. . .
Luz - Ino Inokosha Nguva
Zvinhu zvakasimuka zvakamukira munhu.
Luz - Iko Kurumidza kwehukama naJesu
Nguva dzakaoma dzave pedyo kupfuura zvaunofunga.
Luz - Vechidiki Vawa
Chinja pane zvaunofanira kuva.
Luz - Kubatana Kunodzora Zvakaipa
Iwe unobatana, uchakunda.
Luzi - Paridza Kutenda Kwako muna Mwari
Kunatswa kwevanhu kuri kuenderera mberi.
Luz - Unofanirwa Kuramba Uchifunga
Vangani vari kukanganwa kuswedera kweYambiro ...
Luz - Senge Makwai Asina Mufudzi
Zvakaipa zviri kuramba zvichikuvandira ...
Luz - Thermometer yeiyo Mukati Hupenyu
Mabasa ako ega uye maitiro.
Joinha isu Chipiri, Chikumi 15! Livestream Murazvo weRudo Rosary.
St. Michael ari kudaidzira Zuva renyika reKunamata
Luz - Haisi Nguva Yevaraidzo
... asi nguva yekufungisisa.
Luz - Kwete Mugumo weNyika
Chizvarwa ichi chiri kunatswa.
Luz - Nguva Yekusarudza Yevanhu
Mwanakomana wekuparadzwa akamirira kuoneka.
Luz - Yambiro yeVaccines Makore Ago
Zvisimbisa pamwe nezivo!
Luz - Nhoroondo iri Kutendeuka
Kutendeuka kunofanira kuitika izvozvi!
Luz - Chizvarwa Chekunatsa
Dambudziko rako guru: hupofu hwemweya.
Luz - Zano Rekudzora Nyika
Nyonganiso inouya kuburikidza nekurwara kwemuviri nemweya ...
Luz - Zvakaipa zvakakukanganisa
... kukuita kuti utye kuzivisa kuti uri Nzvimbo yaMwari!
Luz - Chaunotenda chiri kure…
... iri padyo kupfuura iwe zvaunofunga.
Luz - Zvitarise paChokwadi
Pinda mukunyarara kwemukati.
Luz - Shanduko ndeyeMunhu
Usave munhu anongorega.
Ruzi - Kana Chisimbiso Chechikara Chichiuya
Ndiani achavimbika kuMwanakomana wangu?
Luz de Maria - Zvakaringana Hafu Yemoyo Yekuzvipira
Kuchena kwemoyo kunokurumidza.
Luz de Maria - Dambudziko Idzva Richauya
Kudzokera pane zvakajairwa haisi yako chaiyo.
Luz de Maria - Communism iri Kufambira Mberi
Luz de Maria - Zuva Richachinja
Luz de Maria - Pakugadzirisa Pfungwa
Nyowani matekinoroji anokanganisa pfungwa ...
Luz de Maria - Iwe Uri Pedyo Nezviitiko
Iyi Lent ichagara mukucheneswa.
Luz de Maria - Chechi Ichazununguswa
Usatya, chengeta kutenda kwako.
Luz de Maria - Ndichapfupisa Nguva
Mazuva achamhanyira; munofanira kuzvigadzirira.
Luz de Maria - Gadzirira Dzimba Dzako
Ndini mudziviriri wemhuri.
Luz de Maria - Yakakomberedzwa neGlobal Power
... kugadzirira vanhu kuti vazvipire kukumbira mucherechedzo wechikara.
Luz de Maria - Kukohwa kuri Kusvika
... kwete Kutongwa Kwekupedzisira kweMarudzi, asi kwechizvarwa chino.
Luz de Maria - Kubvisa nhumbu Imhosva
Unonzwa kuzadzikiswa kwechiporofita kuri kure here?
Luz de Maria - Chengeta Marambi Ako Achipisa
Ndinokushevedza iwe kuti uve mumwe weVatsvene Vakasara.
Luz de Maria - Hunhu Huchatarisana Nenjodzi
Chizvarwa ichi chichava chakatarisana nemiedzo yekutenda.
Luz de Maria - Nguva dzeKushoma Inosvika
Zvigadzirirei kudonha kwehupfumi
Jesu Kristu anokumbira kuti iyi Triduum yepasirese ipiwe musi waZvita 12 kuna Mai Vedu veGuadalupe
Jesu Kristu anoshuvira kugadzwa kwepasi rese muna Zvita 12 ...
Luz - Dana kune Inokurumidza Shanduko
Zvizhinji pakudengenyeka kukuru ...
Luz de Maria - Kudengenyeka Kukuru
Kudengenyeka kukuru kwakaratidzwa naamai ava kuri kuuya ...
Luz de Maria - Nzizi dzekusateerera
... vari kutungamira vanhu kwaAntikristu.
Luz - Iwo Marudzi Ari Kugadzirira Hondo Yenyika Yechitatu
Ndiri pano kuzokudzivirira, asi iwe unofanira kubva pane zvakaipa.
Luz - Nzizi dzeNyonganiso
Usamirire zviratidzo — zviri pakati pako.
Luz - Iyo Dense Mhute
Zvakaipa zvakapararira pamusoro pevanhu.
Luz de Maria - Ita Reparation Nhasi
Luz de Maria - Usamirire
Vakasara Vangu Vatsvene vari kusarudzwa.
Luz de Maria - Ndiri Kukugadzirira
... kune chakamira pagedhi.
Luz de Maria - Kupepeta Gorosi
Luz de Maria - Chiono & Kufungisisa
Luz de Maria -Kunatswa kweHumanity kuri Kukurumidza
Zvigadzirirei! Chii chichaitika chinotakura munhu kana akaramba ari muna Mwari ...
Nei Tisingakwanise Kutora "Chip."
Luz de Maria pane microchip ...
Luz de Maria - Zvisikwa pachezvaro zviri Kutarisana neMunhu
Saka murume iyeye aidzoka kuna Mwari omuziva.
Luz de Maria - Hupenyu Huchazombofa hwakafanana Zvakare
Usatya: Mauto ese Ekudenga akamirira
Luz de Maria - Hunhu Hunoenderera Pasina Kuziva Zviratidzo
Rudo rweUtatu runoumba chiitiko chitsva
Luz de Maria - Iyo Nguva iri "Zvino"!
Gadzirira Kugwinya kukuru.
Luz de Maria - Tora Basa reChivi Chako
Unofanira kuzviona sezvauri.
Luz de Maria - Usatya, Kunyange Zvakaipa Zviri Kuvanda
Ini handisi kukuudza nezvekuguma kwenyika, asi kucheneswa kwechizvarwa chino.
Luz de Maria - Iva Rudo
Runonzi rudo rweMwanakomana wangu runofanirwa kucherechedzwa muvana Vangu vechokwadi.
Luz de Maria - Kufambira mberi kweCommunism
Kutsvaga nyonganiso yepasi rose pasi pevhara renzara.
Luz de Maria - Dhiyabhorosi Akapinda muChechi
Iwe unozviwana iwe pachako panguva yakafanotaurwa: kuzadzikiswa kwezvakazarurwa.
Luz de Maria - Ramba uri paMweya Alert
Matambudziko, hosha nematenda, izvo zvisiri kungokanganisa muviri chete, asiwo mweya, hazviregi.
Luz de Maria - Uri Kurarama Mukati meCountdown
... kusangana kwako nezvandakafemera vanhu.
Luz de Maria - Dhiragoni Iri Kukurudzira
Izvo zvinodikanwa kuti Amai Vangu vazivikanwe saAmai Vemunhu, Co-redemptrix uye Mediatrix yevese grace.
Luz de Maria - Jesu Haazombokusiye
Vanhu vake vakaita semakwai asina mufudzi.
Luz de Maria - Hutachiona Hwaingova Hutangeri
Vanhu vaMwari vanozviwana vava muGetsemane.
Luz de Maria - Makwai pakati pemhumhi
Ishe wedu kusvika muna Chikumi 13, 2020: Vadiwa Vanhu: Endererai munzira yekushandurwa. Ramba uri mukati merudo rwangu, ...
Luz de Maria - Universe muChaos
Tsungirira, usatore mazwi eDenga zvishoma.
Luz de Maria - Miedzo Haizononoka
Ramba wakatendeka kupfuura zvese.
Luz de Maria - Mhinduro
"Vatungamiriri vehutano pamusoro paMwari"?
Luz de Maria - Kupenga Kwevanhu kuri Kutarisisa
Hondo iri kutungamira kuhondo yenyika.
Luz de Maria - Ziva Zviratidzo zveNguva!
Dzivisa iyo "wave of mazano" ...
Luz de Maria - Yambiro Inoswedera
Namata, sechiitiko cheTsitsi Dzangu chiri pedyo nevanhu ...
Ishe akasika mishonga kubva pasi, uye munhu anonzwisisa haazozvidzi.
Luz de Maria - Ramba Wakachengeteka Mumoyo Mangu
Kugara wakachengeteka hazvireve kusunungurwa kubva kune izvo zvichauya, asi kutarisana nazvo murunyararo.
Luz de Maria - Kutonga kuburikidza nekutya
Iyo Masonic zano yakarongwa kuitira kutonga vanhu kuburikidza nekutya.
Luz de Maria - Ino ndiyo Nguva isiri Nguva
Ino ndiyo nguva isiri nguva ...
Rite kubva kune yeRoma Tsika kune iyo Exorcism Kukomborera kweMunyu uye Mvura
Minyengetero ine chimiro chekuropafadzwa.
Kurwisa maVirusi uye Zvirwere…
Kushandisa zvakasikwa naMwari kuwedzera hutachiona.
Makombora Akakomborerwa Nguva dzeNzara
"Zvibereko zvavo zvinoshandiswa chikafu, uye mashizha avo ekurapa." (Ezekieri 47:12)
Luz de Maria de Bonilla - Namata Uchirwa neHIV
Yedu Mukadzi kusvika, Kurume 15, 2020: Vanodikanwa vana veMweya Wangu Asingaiti: Ndinokuropafadzai panguva ino apo vanhu ...
Luz de Maria de Bonilla - Makomo Anochenesa
St. Michael Mutumwa mukuru kune: Vana, vanhu vachakatyamadzwa nekutsamwa kwemakomo anoputika achiri kusazivikanwa. Munhu acha ...
← Nei Valeria Copponi?
Nei Simona naAngela? →
Kuoma Mitezo Nekutya January 23, 2022
Luz - Ino ndiyo Nguva! January 22, 2022
Pinda Zvose January 22, 2022